विज्ञानले कसरी काम गर्छ ?
विज्ञानले कसरी काम गर्छ ? अनुज घिमिरे
बाह्रखरी - बिहीबार, साउन १०, २०७५
विज्ञान मानव विकासको अभिन्न भाग हो । ढुंगे युगदेखि एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विज्ञानले गरेको मानवको कल्याण र खती निकै बढेको छ । जीवनको सबै पक्ष विज्ञानकै छायामा बित्ने जमानामा पनि विज्ञानमा विश्वास नगर्नेको कमी छैन । विज्ञान मंगल ग्रहमा पठाइने रकेट, धेरैले नबुझ्ने गुरुत्वाकर्षणको हिसाब र धेरैले नपत्याउने पृथ्वी तथा सारा जनावरको क्रमिक विकासको सूत्रमात्र हैन । घरमा आफ्नो कोठामा सोफामा बसेर ल्यापटपमा पढ्दै गरेको यो ब्लगमा पनि विज्ञान छ । नेपालमा बसेर एउटा प्लास्टिक र फलामले बनेको सानो उपकरणमा “ह्यालो“ भन्दा अमेरिकामा उही बेला सुनिनु पनि विज्ञानै हो । ल्यापटपको किबोर्डमा थिच्दा आफूले खोजेकै स्क्रिनमा आउनु पनि विज्ञान हो ।
बिहीबार, साउन १०, २०७५ मा प्रकाशित